Global Voices teny Malagasy » Tenifahatra Ejypsiana Niresaka Momba Ny Homofôbia! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Avrily 2013 12:02 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Awadalla Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Niteraka adihevitra maresaka sy mafana faramparany teo ny antso hiadiana amin'ny homofôbia (fankahalàna pelaka) tao amin'ny media sosialy. Ao Ejypta, mbola fady ny firesahana ampahibemaso ny lohahevitra firaisana ara-nofo, na amin'ny aterineto izany na ivelan'ny aterineto. Na dia tsy voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana Ejypsiana aza ny resaka firaisana ara-nofo, henjehin'ny  tompon'andraiki-panjakana amin'ny lalànan'ny fivarotan-tena sy ny fitondra-tena ireo pelaka.
Nisy ny hetsika Facebook natsangan'i Ramy Youssef  ho setrin'ny fihanaky ny fanafihan'ireo mpankahala pelaka ao amin'ny media sosialy. Araka ny filazany, ny pejy “manitsaka” no malaza vao haingana tao amin'ny media sosialy, izay nampiasain'ireo mpianatra hanehoany ny fihetseham-pony manoloana ny hafa, ny sasany maneho ny fijeriny ireo olon-droa mitovy fananahana miaraka, izay niafara tamin'ny ompam-pankahalana pelaka marobe. Youssef nanoratra hoe:
@nadalouis : Manohitra ny homofôbia satria tsy maintsy misy olona iray akaiky anao amin'ny fiainanao izay pelaka ary tsy fantatrao akory anefa ny momba izany.
@nadimx : Fantatrao ve hoe inona ny olana amin'ireo mpanebaka ireo? Tsy sahy manafika na manebaka ireo mahery fihetsika izay lian-drà, mpamono olona sy mpanolana izy ireo tsy tahaka ny fanafihany ireo olona mifankatia amin'ny endrika hafa. Iza no ratsy fanahy eto?
@Salma_El_Tarzi : Satria raha ny tena marina, miahiahy ny faharefon'ny maha-lahy anao ianao ary tsy manohitra ilay petra-kevitra. Ny porofo dia misy ireo lehilahy sasany taitra amin'ny hoe vehivavy roa mifankatia saingy kiriko amin'ny lehilahy roa mifankatia.
@Amira_Nosseir : Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary fahalalahana manokana ny eo anelakela-penao.
@Dodzym : Tsy olona marary ny pelaka/lesbiana ary satria lehilahy izy ary ny mitia lehilahy dia tsy midika fa hahatsiaro anao amin'ny resaka ara-nofo izy raha manoroka azy ianao.
@Lemonada1 : Manohitra ny homofôbia satria misy ny revo amin'ny fitsipahana izay tsy tahaka azy ireo, ary mibahana ao an-tsainy ihany koa fa tompon'andraikitra amin'ireo olona ary miady hevitra amin'izy samy izy no isafidianan'izy ireo fa tsy amin'ny hafa.
@Lemonada1 : Manohitra ny homofôbia satria afaka manambara ny fironany ara-nofo ny pelaka iray ary mivelona tahaka ny olon-drehetra, ary mety ho tafiditra amin'ny fanambadiana [tsy mitovy fananahana] tsy araka ny sitrapon'izy ireo ka miteraka fianakaviana misaratsaraka.
@AmrJamil : “Fahotana izany”, midika izany fa mitsabaka amin'ny fifankatiavan-olon-droa manokana, amin'ny fifankatiavan'izy ireo amin'Andriamanitra ary amin'ny fifankatiavan'izy ireo eny ambony fandriana ianao.
Nizara  sary eny an-drindrina fankahalana pelaka teo aloha navadiky ny mpikatroka sasany ho fankahalana mpankahala pelaka i Leil-Zahra Mortada. Ao amin'ny lalana Mohamed Mahmoud no ahitana ity sariitatra ity izay nisian'ireo fifandonana marobe teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana revolisionera. Novakiana hoe “Polisy pelaka” ny sariitatra tany am-boalohany izay natao hanompana ny polisy, voatsikera mafy noho ny fampiasana herisetra amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Rehefa nasiana fikitihana, vakiana toy izao indray ny sariitatra “tsy revolisionera ny homofôbia”. Sombiny amin'ny fanehoan-kevitra hita tamin'ny sary ny hoe:
@MAIEPANAGA : Tsy tahotra voa-janahary izany (fôbia), zanaky lahin'ireo mpivaro-tena tsy mino ny fahalalahan'ny olona amin'ny safidiny sy ny vatany eo amin'ny fiarahamonina na ny fitondra-tena na ny fivavahana ireo. Tsy misy ilàna azy ianao!
@Gharebon : Satria tsotra ihany, manan-jo “hifaly” amin'ny fomba izay tiany ny tsirairay.
@ABA_NOB : Antsoinao hoe “PD na pelaka” izy ireny”? Mahatsiaro tena fa lehilahy ianao? Mahatsiaro faly ianao?
@7amidovich : Hiaraka handrava ity tenifahatra ity, hiaraka hamono ny teny hoe “PD na pelaka”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/06/47425/
 hetsika Facebook : https://www.facebook.com/events/138154226364285/?ref=14